सभ्य बलात्कारी ! – Lekbesi Khabar
सभ्य बलात्कारी !
म अनि म जस्ता धेरै पुरुष आज सम्म यस्ता सभ्य बलात्कारी भएका छन् । बलात्कारीलाई थाहा होला नहोला तर पेट्काका मांसपेशी दुखिरहन्छन तर पनि नारी मुस्काइरहेकि हुन्छिन,
पीडा झुठो हुँदैन ।
श्रीमानले माया गर्छ भन्दैमा, श्रीमानलाई नाई भन्न नहुने यो कस्तो चलन हो?
यो एउटा कथा हो जुन वास्तविक छ ।
कसैको हैन धेरैको जीवनसंग मेल खाने छ,
यो संयोग हैन, किनभने मैले जे लेखे धेरैले भोगिरहेका छन् ।
यो एउटा महिलाको कथा हो, वेदनाको कविता हो!
उनी एउटी सहनसिल पात्र हुन,
हृदयले सुस्त श्रवण छन्, पुरुषले नारिको भावना कहिल्यै सुन्दैनन ।
म को हुँ त्यसतर्फ नखोज्नु होला है ?
म तपाइकै श्रीमती जस्तै,
दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तै
अनि साथी जस्तै एकजना, कथावाचक पात्र हु,
या सुत्रधार जे भन्ने मन छ भन्नुहोस!
कथा शुरु हुन्छ मेरो विवाहको पहिलो रातबाट,
म सुत्न सकिन, उसको सन्तुष्ट घुराइमा म आफूलाई खोजिरहेकि थिए, तर शायद पाइन मैले आफूलाई उ भित्र।
उसले मलाई सोधेन, मेरो थकाइ बारे कुनै प्रश्नन गरेन । हरेक बिहान ओच्छ्यानमै उसलाई चिया चाहिएको थियो र हरेक साँझ ओच्छ्यानमै मेरो शरीरको डस्ना । उसले मलाई माया गर्छु भन्यो, मैले पत्याइरहे ।
मलाई मेरो माइतले पनि त त्यहि सिकाएको हो, पतिलाई माया गर्नु, सेवा गर्नु, मैले गरिरहें ।
शुक्रबारको साँझ थियो र मेरा पति साँच्चै रातीसम्म अबेर कार्य गरिरहेका थिए, उनी ति दिनमा वास्तवमैं व्यस्त थिए । मलाई नराम्रो लाग्छ किनभने उनले हप्तामा केवल एकदिन मात्र बिदा पाउँछन् तर खुशी लाग्छ किनभने उनी भन्छन् कि तिमिलाई माया गर्छु!
म केवल गृहणीमात्र हैन, म त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गृहणी पनि हुँ । उनी कमाउने कार्य गर्दछन् र म ब्यबस्थापन गर्ने गर्दछु, पैसाले मात्र खाना पाक्दैन नि, म त्यो रसायन स्त्री हुँ जसलाई जीवनका रसायन र घरको भौतिक बिज्ञान पनि थाहा छ ।
अफिसबाट सोझै घर आएका उनी लुगासम्म फेर्न भ्याएका थिएनन्, उनी काम सकाएर कोठामा आए । सुस्तरि कपडा खोले, मैले उठेर उनलाई कपडा खोल्न सर्टका बटन खोलेर सहयोग गरे । मेरो कम्मरमा समाते र आफ्नो शरीरतर्फ ताने, मैले नाई भने । मेरो पेटमा पीडा थियो, माफ गरिदेउ, नछुने भएको केवल अस्तिको सोमबार मात्र हो । उसले मलाई छाड्यो यसरी मानौ आँप खाएर कोया फाले झै फाल्यो!
उनले भने, हस ठिकै छ म बाहिरै केही ब्यबस्था गर्छु… लुगा बाँडेजस्तो म श्रीमान बाँड्न कहाँ सक्छु र?
मैले सहिरहें उनको बाहिरी ब्यबस्थापनको कुराले मेरो पीडालाई मैले माफ गरे, उनी चढिरहे म रोइ रहे, आझाबाट आसुका ढिक्का झारिरहेँ!
मलाई ओच्छ्यानमा फालेर उनी हामफाले, यस्तो लाग्यो कि माया गर्नु उनकालागि बिकल्प हैन बाध्यता हो । उ भन्छ, तिमिलाई मलाई माया गर्छु!
६ पुष २०७६, आईतवार १२:४१ December 22, 2019
दिउँसै पार्कमा याैन सम्पर्क राख्ने जोडीकाे भिडियाे ‘सीसीटीभी’ मा कैद भएपछी…